काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले आइतबार अमेरिकी विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौता र यसको व्याख्यात्मक घोषणा अनुमोदन गर्यो । योसँगै ५० करोड अमेरिकी डलर (करिव ६० अर्ब रुपैयाँ)को अमेरिकी विकास सहायता कार्यन्वयन तर्फ अघि बढेको छ ।
नेपाल र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ गते सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । हस्ताक्षर भएको करिव साढे चार वर्षपछि यो सम्झौतालाई आइतबार संसदले अनुमोदन गरेको हो ।
यो चार वर्षमा एमसीसीले सडक र सदन दुवै ततायो । सत्तारुढ गठबन्धनबीच फाटो ल्यायो । एमसीसी अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस बाहेकका चार दल विपक्षमा थिए ।
किन बढ्दैछ रूस–युक्रेन तनाव, नेपालमा कस्तो असर गर्ला ? हामीले यसपटक नजितेका मात्र हौ, हारेका हैनौ : डेलिगेट डा. ह्यारी भण्डारी